Ciidamada ammaanka maamul goboleedka Jubbaland oo markab hub lagu soo qariyay ku qabtay dekada magaalada Kismaayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandCiidamada ammaanka maamul goboleedka Jubbaland oo markab hub lagu soo qariyay ku qabtay dekada magaalada Kismaayo
January 24, 2017 Abdi Omar Bile Jubaland, Somalia 0
Ciidamada ammaanka maamul goboleedka Jubbaland oo markab hub lagu soo qariyay ku qabtay dekada magaalada Kismaayo. [Sawirka: AP]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa shalay oo Isniin ahayd dekada magaalada Kismaayo ku qabtay Markab ganacsi oo lagu soo qariyay hub, sida uu sheegay sargaal.
Sargaal katirsan Jubbaland oo codsaday in aan magaciisa la sheegin ayaa warbaahinta u sheegay in markabka uu ka yimid magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayna saarnaayeen badeeco.
Sargaalka ayaa sheegay in ciidaamada ammaanka ay xireen dhammaan shaqaalihii markabka.
Ilo-wareedyo ayaa sheegaya in markabka uu u rarnaa nin ganacsade ah oo magaciisa la dhaho Cabdi Jamaal.
Saraakiisha Jubbland ayaa ka gaabsaday in ay sheegaan noocyada hubka ee saaran markabka.